Repoblikan’i Kongo: Nampisahotaka Ny Fipoahana Fitoeram-Bala Tao Brazzaville · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2012 1:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Ελληνικά, Español, বাংলা, English
Nanao izao fanambarana manaraka izao ny minisitry ny fiarovana tao amin'ny fahitalavi-panjakana:
Tranga vokatry ny fahamaizan'ny fitoeram-bala fotsiny io. Izany no nahatonga ny fipoahana miverimberina. Tratran'ny poti-bala ny trano sasany ka nampanidina ny tafo fanitso ary nahavaky ny fitaratra. Ny fahamaizana ao amin'ny rezimantan'ny fiara mifono vy, fitoerana ametrahanay ny bala, no fototry ny fahapotehana. Amin'izao fotoana itenenako aminareo izao dia efa eny an-toerana ny manampahaizana manokana mamono ny afo. Handray fepetra izahay mba tsy hisy intsony ny trngan-javatra tahaka izao amin'ny manaraka. Maneho ny fialan-tsiny aminareo izahay ry tompokolahy sy tompokovavy, ry rahalahy sy anabavy, noho izao fikorontanana izao: nisaritaka nivezika havia sy nivezika havanana ny olona. Miangavy anareo izahay mba hody any an-tranonareo fa efa voafehy ny raharaha. Manome antoka anareo izahay fa tsy misy fiokoana eto na hoe fanonganam-panjakana izany. Trangan-javatra mampalahelo izay ialanay tsiny indrindra iny. Nahare izahay fa nisy ny naratra – fa tsy betsaka izy ireo – noho ny poti-bala. Miala tsiny indrindra izahay.
Tsy mbola mazava ny isan'ny naratra amin'izao fotoana izao, saingy araka ny loharanom-baovao maro dia an-jatony no mety ho namoy ny ainy ary an'arivony ny naratra. Tamin'ny voalohany ny fitondrana dia nanamarika fa efatra no maty, ary ampolony no naratra, tombana izay ambany dia ambany, araka ny filazan'i Fortuné Ndombé, mpanao gazety Kongoley monina ao Brazzaville. Niantso telefonina an'i Ndombé ny mpanoratra ka nanazava ny fizotran'ny raharaha izy [fr]:
Eto amin'ny hopitalin'i Brazzaville aho izao. Voina tsy mbola hita hatrizay ity. Mbola misy ny afo ary maro ny trano mirodana, loza ity marina. tsy hay ny manazava izay nitranga. (…) Mbola tsy voafehy ny raharaha. Te-hampino ny fitondrana fa tsy nisy ny maty, nefa dia maro no maty. Hika tanteraka ny hopitaly. Malahelo aho fa saika mikatona avokoa ny Fivarotam-panafody. Tokony antsoina manokana izy ireo ahafahan'ny olona mahazo fanafody. Rahampitso angamba vao hahalala bebe kokoa isika. Raha misy miteny aminao hoe efa voafehy ny raharaha dia lainga izany.
Mitovy hevitra amin'ny fandavana ihany koa ny mpisera Twitter @BaaRbieCaRteR, izay nanoratra hoe:
Maty 4 sy maratra 24! Fa izay no ampiesonina amin'izany??! Mihoatra ny 300 ny maty! Tahaka ny hoe any Iràka ny eto
Namoaka ity sary manaraka ity ihany koa izy, izay heverina ho nopihana nandritra ny fipoahana faharoa:
Fipoahana faharoa teto Brazzaville hoy i BaaRbieCaRteR on Twitter
Mozambika 2 andro izay